နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသော Grey Color Makeup Puff China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Microfiber မျက်နှာသုတ်ဆေးအလှပြင်ခြင်း,မိတ်ကပ် Remover Powder Puff,နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသောမိတ်ကပ်ပုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Air ကိုကူရှင် Puff > နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသော Grey Color Makeup Puff
ထုပ်ပိုး: package ကိုဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်လုပ်လိမ့်မည်။ ရေမြှုပ်တစ်ခုစီတွင် OPP အိတ်တစ်ခုရှိသည်။
1. စုပ်ယူနိုင်မှုပိုသည်၊ troditional သုတ်ပဝါထက် ၇ ဆပိုများသည်။ ညင်သာစွာအစိုဓာတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာ wrung ။
3. Anti- mite, ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ကုသမှု။ သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုပို
ပုံသဏ္roundာန်ပတ်ပတ်လည်တွင်ပြုလုပ်သောမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာတယ်ရီအထည်နှင့်ရေမြှုပ်တို့ကိုအသုံးပြုပါ၊ အမြင့်ဆုံးရေစုပ်ယူမှု၊ ခိုင်မာသောပိုးမွှားကင်းစင်မှု၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ စတစ်ကာခိုင်ခံ့မှု၊ ရေစုပ်ယူမှုနှုန်းသည်သာမန်သန့်ရှင်းသည့်သုတ်ပဝါထက် ၇ ဆရှိသည်။
BB Cream Air ကိုကူရှင်အလှကုန် Puff အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Microfiber မျက်နှာသုတ်ဆေးအလှပြင်ခြင်း မိတ်ကပ် Remover Powder Puff နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသောမိတ်ကပ်ပုံ မျက်နှာမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ကပ် Brush မျက်နှာမိတ်ကပ်အဘို့အ brush သတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ် Brush ကိုအသုံးပြုခြင်း Professional ကမျက်လုံး Brush သတ်မှတ်မည်